Mhosva mukutenga kuburikidza neEcommerce | ECommerce nhau
Dhijitari yekutenga yakatove yakaiswa panzvimbo yenyika senge tsika inoteverwa nezviuru nezviuru zvevashandisi. Izvi zvinoratidzwa mumushumo uchangobva kuitwa neO Observatory yeEvolution yeElectronic Commerce muKudya. Uye mune iyo inowanikwa kuti vangangoita 30% yevatengi veSpanish tenga zvigadzirwa zvevatengi vakawanda online. Uye izvo zvinowedzera muzvikamu zvinehukama nemamwe madhijitari ekutengeserana.
Asi kumwe kwekusava nechokwadi kukuru uko vanhu ava varipo ndiko kunoreva kudzoka kwavo uye nzira dzavainadzo kuti vagadzire zvavanoda kana zvichemo. Tichifunga pfungwa iyi, zvakati wandei kana zvishoma, kuti kune zvimwe zvipenga mumitemo yazvino pachiitiko chehupfumi ichi. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kudzosa sarudzo yakanaka mune iyi nyaya. Kunyanya, mune neyake zvichienzaniswa nechinyakare kudyiwa kana zvakajairika.
Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti kutengeserana kwemagetsi muSpain kune mitemo kuitira kuti vatengi vakwanise kudzosa chigadzirwa kana chinhu chakatengwa. Asi apo nhevedzano yezvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuita maitiro nenzira inogutsa yezvido zvevashandisi vacho. Muchidimbu, isingazivikanwe neaya uye ayo anoenderana seakanyanya kunobva kupokana mutsika dzekutenga pamhepo.
1 Mhosva muEcommerce
2 Kuteerera nemisi yakatarwa
3 Inovimbisa mukutenga kwepamhepo
4 Kubvisa nguva
5 Mamwe kodzero dzevatengi pamhepo
6 Kugadzirisa uye kutsiva kwezvigadzirwa
Vashandisi vanofanirwa kuziva nguva dzose kodzero dzinovabatsira pavanenge vachizotenga chigadzirwa muEcommerce kana chitoro chedigital. Pamusoro pezvo, zviri kuwedzera kuitika kumakambani aya kuburitsa pachena zvakajeka pamapeji avo ewebhu iyo mamiriro eaya mabhizimusi mashandiro. Zvekuti vagone kubvunzwa nevashandisi neruzhinji rwevanhu vasina kusiya duraini.
Nedzakateedzana rekodzero dzakabatanidzwa mumutemo wevatengi uripo, uye izvo zvinokanganisa chero chikamu chekutenga pamhepo. Kubva mukutora kwemidziyo yemakomputa kune zvipfeko kana zvipfeko zvevechidiki. Kupfuura, kune rimwe divi, kuburikidza nemamwe maratidziro akasimba akabuda mumakore apfuura nekuda kwehunhu hwakanaka hweiyi miitiro pakushandiswa pakati pevatengi venyika.
Muzviitiko izvi, unenge waziva kodzero mune mamwe mabasa epamhepo kubva kune chero chitoro chedigital. Tiri kuzokufumura kune vamwe vaunotenderwa mune aya marudzi ekutenga pamhepo.
Ecommerce inofanirwa kuzvizivisa pachayo kumutengi
Unogona kusazviziva, asi makambani aya anofanirwa kupa yavo data pawebhu. Chero bedzi ivo vakagadzwa zvakafanira munharaunda yenyika. Senge anotevera masosi ekuzivikanwa:
Yako nhamba yekuzivisa mutero kana NIF.
Iyo data yekutaurirana navo kana paine chero chiitiko.
Nzira dzekubhadhara dzekutenga
Iyo inofungidzirwa nemirau yazvino yekuti iyo yekutengesa kana yechitoro yedhijitari inopa vatengi vayo runyorwa rwezvinobvumidzwa nzira dzekubhadhara. Pakati payo pane zvinotevera:
Kiredhiti nemakadhi ekubhengi.
Kuendeswa kweBhangi, zvese zvepasirese uye zvepasi rese.
Nyowani tekinoroji yemagetsi ekubhadhara mafomati.
Uye pakupedzisira masystem, akadai Kubhadhara Pal kana vamwe vane zvakafanana maitiro.
Muzviitiko zvese zvataurwa, ivo havazokwanise kubhadharisa vatengi vavo kana vashandisi chikwereti chekushandisa kwavo. Uku kunogona kuve kubiridzira kwemutemo kunoda kunyunyuta kwakakodzera kune vane masimba, kazhinji mabasa evatengi munharaunda dzakazvimiririra kana makanzuru emataundi.
Kuteerera nemisi yakatarwa
Icho chimwe chezvinhu zvinonyanya kunetsa vashandisi, kunyanya nekuda kwekunonoka uko izvo zvigadzirwa kana zvinhu zviri kudiwa zvinogona kutambura. Mupfungwa iyi, kana pasina chirevo chakatarwa, izwi rinosvika pazvinhu zvinogamuchirwa mwedzi uzere.
Kana kune chero mamiriro ezvinhu asina kuzadzikiswa, mushandisi angave nesarudzo dzinoverengeka dzekumisikidza mune ino maitiro:
Zivisa mutengi kuti pachave nekusiyana mune mazwi. Wakatarisana nemamiriro aya, une dzimwe nzira mbiri:
Kanzura iko kushambadzira kushanda
Enderera mberi nemaitiro, asi unofanirwa kubhadhara imwezve mari.
Nepo kune rimwe divi, mune zvinoitika zvekunonoka zvisina kukodzera, vanogona kugara vachitaura kuti vanobhadhara zvakapetwa chikamu chinofungidzirwa pakutenga uku. Kunyangwe iwe kuti uve nayo yakajeka kubva ikozvino zvichienda mberi, zvese zvinodzikira kune chokwadi chekuti mushandisi Une mazuva gumi nemana ekudzima kutenga yeaseti pasina kupembedza chikonzero, uye huwandu hwacho hunofanira kudzoserwa mukati memazuva gumi nemana ekubviswa.
Inovimbisa mukutenga kwepamhepo
Icho chimwe chezvekunetseka kukuru pakati pevatengi. Ziva kana chigadzirwa kana chinhu chakatengwa chine vimbiso. Zvakanaka, zvakafanana nekuti tanga tatenga muchitoro chaicho. Ndokunge, ine yakanyanya nguva yekusvikira makore maviri uye kuti ipfupikiswa kusvika panhanhatu kana iko kuremara kuri kwekutanga uye saka hazvitore nguva yakareba kudaro kuve neiyi dziviriro muvashandisi.
Mune chero zviitiko zvacho, mirau inogadzirisa chero kusahadzika uye pakupedzisira inopa kodzero dzakafanana seyakajairika kana zvimwe zvetsika zvekutenga. Izvo zvinova zviri pakupedzisira mune izvi zviitiko.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvine nharo mukutenga pamhepo uye kuti kusvika makore mashoma apfuura vakapa kusahadzika kanopfuura kamwe. Asi nechishandiso icho chiri inounganidza mumutemo wevatengi, yakagadziriswa zvachose kugutsikana kwevashandisi vatsva.
Dzese idzi tsananguro dzinoratidza mamiriro akajeka kwazvo kune vatengi. Uye ndeyekuti iyo mitemo inovachengetedza muhukama hwavo hwekutengesa kuburikidza neInternet. Kunyangwe zvisiri mune zvese, ehe zvirinani mune yakawanda yekuwandisa kwezuva nezuva zviito zvine zvekutengeserana kana zvemagetsi chitoro. Kusvika pakuve nhau dzakanaka kwazvo, zvese kune vezvemabhizinesi uye kune vatengi veayo maratidziro network.
Mamwe kodzero dzevatengi pamhepo
Chero zvazvingaitika, unogona kusvika panzvimbo yemusangano uye imhaka yekuti vashandisi havana kudzivirirwa kubva pakutenga kwavo muchitoro chepamhepo. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vane angangoita akafanana mvumo sekutenga kwepanyama kana kwakajairika. Ichi chinhu icho mapato maviri anogona kutora mukana nekuti chinopa chengetedzo huru uye kuremekedzwa kune bhizinesi maitiro, pasina kunze kwemhando ipi neipi.
Ndichiri kune rimwe divi, zvinodawo kusimbisa kuti mushandisi anotsigirwa neyazvino Retail Trade Regulation Mutemo. Kunyanya kuburikidza nezvayo zvinyorwa 39, 40 uye 41 mairi zvinosiya zvakajeka kwazvo ruzivo rwese rwunofanira kuziviswa nemushandisi pakutenga kwavo. Izvo hazvina basa, rudzi rwechigadzirwa kana chinyorwa: zvigadzirwa zvetekinoroji, kuchengetedza mabasa evashanyi, zvipfeko zvemitambo kana nhare mbozha pakati pezvimwe zvakakosha zvikamu zvemagetsi zvemagetsi.
Izvi ndizvo zvimwe zve kodzero dzevatengi vepamhepo uye kuti neimwe nzira havasiyane zvakanyanya kubva pakutenga chaiko. Semuenzaniso, iwo atinofumura anotevera.
Kuzivikanwa kwemutengesi nekero rake zvakadzama.
Izvo zvakakosha zvehunhu hwechigadzirwa, senge mamwe maratidziro kana ayo makuru maficha.
Mutengo wekutenga, uye panofanirwa kuverengerwa mutero.
Dhirivhari nekutakura mitengo, kana zvichibvira.
Iyo fomu yekubhadhara uye kuendesa kana kuuraya nzira. Kufungisisa, semuenzaniso, kana iko kuvhiya kuchiitwa nemakadhi echikwereti kana echikwereti kana nemaitiro matsva ehunyanzvi.
Kuvapo kwekodzero yekubvisa kana kugadzirisa, kana kusavapo kwayo muzvibvumirano zvinotaurwa muchinyorwa 45.
Mari yekushandisa nzira yekutaurirana iri kure kana ichiverengerwa pane imwe nzvimbo isiri iyo yekutanga mwero.
Iyo nguva yechokwadi chekupa uye mutengo. Saka kuti nenzira iyi, hapana zvikanganiso pamusoro pemitemo yekupihwa uye kushambadzira kwekushambadzira kubva paInternet.
Iyo yakaderera nguva yechibvumirano, kana zvichibvira, mune yechiitiko chekupa zvigadzirwa zvibvumirano zvakagadzirirwa kwekusingaperi kana kudzokororwa kuuraya.
Mamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu ayo mutengesi aigona kupa chigadzirwa chemhando yakaenzana uye nemutengo, pachinzvimbo cheicho chakakumbirwa nemutengi, kana mukana uyu uchifungidzirwa.
Kugadzirisa uye kutsiva kwezvigadzirwa
Kwete yekukosha kudiki ichi chimwe chikamu mukati meiyo e-commerce chikamu. Zvakanaka, iwe unofanirwa kurangarira kubva zvino zvichienda kuti zviitiko zviviri izvi zvichave zvemahara zvachose kumutengi. Iko kunotevera mari inosanganisirwa:
Mari dzinotorwa kubva kubasa.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvakakosha, asi kune rimwe divi iwe unenge uinewo kodzero yeiyo chaiyo sevhisi sevhisi uye kuvapo kwezvipenga zvikamu zvenguva shoma yemakore mashanu kubva pazuva iro chigadzirwa charega kugadzirwa. Ndokunge, zvakawanda kupfuura zvaunogona kufungidzira kubva pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Mhosva mukutenga kuburikidza neEcommerce